အောင်မြေကိုသာ လွမ်းတော့သည်(ငါးမည်ရပြည်ရွှေဘို) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » အောင်မြေကိုသာ လွမ်းတော့သည်(ငါးမည်ရပြည်ရွှေဘို)
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Aug 29, 2011 in Local Guides, Photography | 17 comments
ရွှေဘိုမြို့က နန်းတော်ဟောင်းနေရာမှာ အသစ်ပြန်ဆောက်ထားတာပါတဲ့။
ရွှေဘိုမြို့ကို 2005ခုနှစ်မှာရောက်တုန်းက ဈေးအနောက်ဘက်လမ်းကနေဖြတ်သွားခဲ့ပါတဲ့အခါ လမ်းအရှေ့ဘက်မှာ စုလစ်မွန်းချွန်တွေရွှေရောင်တစ်ပြောင်ပြောင်နဲ့လှမ်းမြင်တော့ နန်းတော်နေရာဟောင်းမှာ ပြန်အသစ်ဆောက်ထားတာလို့ပြောပါတယ်။
ဟိုအရင်က နန်းတော် နောက်တော့ အကျဉ်းစခန်း(ထောင်) အခုတော့ မူရင်းမပျက်ပြန်တည်ဆောက်ထားတာသိရပါတယ်။
ဲအဲဒီတုန်းက အချိန်မရလို့ မ၀င်ခဲ့ရပေမယ့် ခုတစ်ခေါက်တော့ မရောက်ရောက်အောင်သွားခဲ့ပါတယ်။
အ၀င်ဝမှာမြင်ရတဲ့ ကျောက်စာ သံတံခါးပ်ိတ်ထားတာရယ် ရေတွေရယ်ကြောင့် ဖတ်တော့ဖတ်ခွင့်မရ။
အ၀င်ဝ တောင်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ ဘုံစံတုလွှတ်ကျောက်စာရုံ
အလယ်နန်းမတော် ဒီအထဲမှာတော့ အကြီးဆုံးပါဘဲ
အလောင်းမင်းတရားရဲု့အုဌ်ပြဿဒ် အထဲမှာကျောက်စားလေးတွေရှိတယ်
ပိတ်ထားတော့ အပြင်ကဘဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ရတယ် အထဲမှာကျောက်စာတိုင်တစ်ခု
စာတန်းတွေထိုးထားတဲ့ကျောက်စာ ပိတ်ထားတော့ မဖတ်ခဲ့ရဘူး အလောင်းဘုရားပြဿာဒ်အလယ်ခေါင်မှာရှိတာပါ
ဒါကတော့ ပြတိုက် လေးနာရီကျော်တော့ ပိတ်သွားလို့ အထဲမ၀င်ခဲ့ရ
နန်းကြီးပေါ်ကမြင်ကွင်းကလွမ်းစရာ ရှေးဘုရင်များလဲ ဒီလိုကြည့်ခဲ့မယ်ထင်ပါရဲ့
ရွှေဘို နန်းတော်ဆောင် တွေ ထဲ
အလောင်းမင်းတရား ဘုန်းတန်းခိုးကြီးစဉ်က ဘယ်လိုများနေထိုင်ခဲ့မလဲ မသိဘူးနော်။
ပလ္လင်တွေ ဘာတွေ ကြည့်ရတာ အဲဒီ ခေတ်က ပုံကော ဟုတ်ပါ့မလား.. မန်း က ပုံစံ အတူယူထားတာလား မသိဘူး။ လွမ်းမိုးမှု အရိပ်တွေ ထင်နေတယ်။ စိတ်ထင်တာ ပြောပါတယ်။
ရွှေဘိုကို တစ်ခေါက်တော့ ရောက်ဖူးတယ် … အဲဒီနေရာတော့ မရောက်ခဲ့ဘူး …
ပုံတွေတင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …. တစ်ခေါက်သွားဖို့ဆိုတာ သိပ်မလွယ်တဲ့နေရာတွေ ….
ရွှေဘိုမှာငယ်ငယ်က ၂ နှစ်တောင် နေခဲ့ဘူးတာပါ ( ၁၉၉၁-၁၉၉၂)။ ဒီလိုနေရာရှိမှန်းမသိခဲ့ဘူး။
လေးပေါက်က တင်ပေးတော.လည်း ကျနော်ဝင်ကြည်.လိုက်တယ်
ရွှေဘိုမှာနေရစ်ခဲ့တဲ့ မိသားစုကိုလည်း လွမ်းတယ်
ငယ်ကျွမ်းဆွေ စာဥ ကိုလည်းလွမ်းတယ်
အခုနေ လွမ်းလို့ ကျနော်ရွှေဘိုသား သေသွားလို.ကတော. လေးပေါက် တရားခံပဲနော်
လေးပေါက် မပြေးနဲ. ခဗျကို စစ်အစိုးရ စွမ်းအားရှင် တွေဝိုင်းထားတယ်
လေးပေါက်က အခုလိုတင်ပေးတော. ကျနော်လတန်ခူးမှာ ပြန်ရင် ရိုက်တင်မယ်လို.မှန်းထားတာ
အခုတော. လေးပေါက်ကတင်ပေးတော. ရွာသားတွေ စောစောမြင်တွေ.ခွင်. ရသွားတာပေါ.ဗျာ ကျေးဇူးပါလေးပေါက် ကျနော်သေရင် လေးပေါက် တရားခံနော်
နေရင်းထိုင်ရင်းတရားခံရှာနေပီ ကိုပေါက်ရေ့။ရွှေဘိုမင်းကြိုက်တွေမတွေ့ ရသေးဘူး။ကိုပေါက်အတွေးမရသေးလို့ ထင်တယ်။ဟိ
ကိုပေါက် ရေ ကျွန်တော်တို.ငယ်ငယ်တုန်းကတော. ထောင်ကြီးပါ (အခုတော. နန်းတော်ကြီးပေါ.)
တံတိုင်းကြီးတွေကလည်း အမြင်.ကြီးတွေဗျ။ အဲ ဒီတံတိုင်းကြီးတွေက အလောင်းမင်းတရာလက်ထက်ကတည်းကရှိခဲ.တာလား English အစိုးရလက်ထက်မှရှိတာလား မသေချာဘူးဗျ။အခုတော.မရှိတော.ပါဘူး။ပီးတော. အထဲက အချို. နန်းဆောင်လေးတွေကရော(ဥပမာ တောင်ဘက် မိဖုရားအဆောင်လိုမျိုး) အလောင်းမင်းတရားလက်ထက်ကတည်းကရှိခဲ.တာလားမသိဘူး။အရင်တုန်းက ထောင်ကြီးဆိုတော. ၀င်မကြည်.ဘူးဖူးဗျ။ သိရင်ပြောပြပေးပါ။အခု လို တင်ပေးတာကျေးဇူးတင်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်ကရွှေဘိုသားမို.ပါ။
ကားခမကုန်စေပဲနဲ့ အလိုလို ရောက်ရှိသွားသလိုခံစားရပါတယ်။ အင်း မရောက်ဖူးတဲ့နေရာကျန်သေးတာက ရွှေဘိုမြို့လည်း ပါနေသေးပါကလား…. ကျေးဇူးပါရှင်… မုန့်ဆိုင်တွေကော ရှိလားဟင်… ကားနဲ့ပဲတစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာသွားရတာလား လမ်းလျှောက်သွားရင်ကော ရလား…
ရွှေဘိုသား ပြန်တဲ့အချိန်ကြတော့လဲ ထပ်ပြီးဓါတ်ပုံတွေတင်ပေါ့။
ကျနော်က ခဏလာတော့ မရောက်တဲ့နေရာတွေရှိအုံးမှာပါ။
ရွှေဘိုကိုပထမတစ်ခေါက်က ကန့်ဘလူသွားရင်း ခဏ၀င်နားတာ။
ရှေးကဘယ်လိုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ တော့ ဇာတိမြို့ခံတွေက ကျနော်ထက်ပိုသိမှာပါ။
အင်္ဂလိပ်လက်ထက် မြို့အ၀င်အထွက်မှာ သချိုင်းတွေလုပ်တယ်။
အခုခေတ်မှာတော့ အဲဒါတွေကို တတ်နိုင်သလောက်ဖယ်ယှားပစ်ပါတယ်.။
ကျနော်က သာမန်အရပ်သား လက်ယားလို့ ဓါတ်ပုံတွေတင်တာလေ။
ဒါပေမယ့် သူများကို ထိခိုက်နစ်နာစေလိုတဲ့ဆန္ဒမရှိသလို ကိစ္စတစ်ခုကိုသွယ်ဝိုက်လဲမနေတတ်ပါဘူး။
နှစ်သက်တာ မနှစ်သက်တာ ရှင်းရှင်းလေးနဲ့
ဒီတစ်ခါပြန်ရင် မန်းလေးကို ၀င်ခဲ့။
ကိုပေါက်နဲ့မင်း ရွှေဘိုကို အတူသွားမယ်ကွာ။
ဟို ပို့ စ်ထဲက အဖြစ်ဟာ အမှန်များလား လို့ တောင် ထင်သွားရတယ်
အဲ့ဒီရွှေဘို ………. ဘယ်လိုရေစက်ရှိလဲမသိဘူး တစ်ခါမှမရောက်ဖူးဘူး အမျိုးအဆွေလဲမရှိဘူး
အိမ်မက်ထဲမှာတော့ ခဏခဏရွှေဘိုဆိုတာရောက်တယ် ရွှေဘိုမှာနေတယ်လို့မက်မက်နေတယ် ဗျာ…
တော်ကြာရွှေဘိုသူမြင်မှ အရင်ဘ၀က ငါ့ ဟာလေးလို့မပြောနဲ့နော်
ရွှေဘိုကို တစ်ခေါက်ရောက်ဘူးတယ် ခဏပါပဲ
ဦးပေါက်ရိုက်တဲ့ ရွှေနန်းတော်ကြီး ထောင်ဘ၀ တုံးက အထဲကို တစ်ခေါက် ၀င်ကြည့်ဘူးတယ်
နောက် ရွှေဘိုမှာ ရွှေချက်သို ဘုရားဆိုတာ ရှိသေးလားလို့ ၀ါးတားတားဖြစ်နေတယ်
ုမြန်မာပြည်ကားလမ်းဘေးက မြို့အ၀င်အထွက်တိုင်းမှာသချိုင်းတွေရှိတယ်။ ဆိုတာမှာ တခြားမြို့တော့ မသိဘူး ရွှေဘိုကတော့ အလောင်းမင်းတရားကြီး စစ်တိုက်ထွက်ခါးနီးတိုင်း နင်းတဲ့ အောင်မြေမှာ င်္သချိုင်း လုပ်လိုက်တာတော့ မှတ်မိတယ် ထောင်ဆိုလဲ နန်းတော်နေရာ မှာ ဆောက် ပလ္လင်ရှိတဲ့နေရာ မှာ ကြိုးစင်ထားတယ် နံနှိမ်တာပေါ့
ဦးပေါက် ပုံတွေကြည့်ရင်း အဆောင်ဆောင်တွေမှာ နေရင်း မင်းကြီး ဘယ်အချိန် ငါ့ဆီလာမလဲလို့ မျှော်နေရမဲ့ အဆောင်သူတွေ (တောင်၊မြောက်၊နောက်) ဘ၀ ကိုလဲ တွေးမိသွားတယ်
ဒါကြောင့်လဲအခုခေတ်မှာ သချိုင်းတွေကိုပြန်ရွှေပြီး ကားကြီးကွင်းလုပ်လိုက်တာလေ.
ကျနော်တို့မယုံပေမယ့် ယုံသူတွေလုပ်ကြတဲ့ ဗေဒင်ကိန်းခန်းတွေပါခင်ဗျာ။